मूल्य बढ्यो अमेरिकी डलरसहित सबै देशको, हेर्नुहोस् कुन देशको बिनिमय दर कति ? – PanchKhal Online
Home/समाचार/मूल्य बढ्यो अमेरिकी डलरसहित सबै देशको, हेर्नुहोस् कुन देशको बिनिमय दर कति ?
काठमाडौँ । आज बिहीबार नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरसहित केहि देशको मूल्य बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले तोकेको बिनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ११ रुपैयाँ २४ पेसा रहेको छ । भने बिक्रिदर १ सय ११ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ६५ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ३ सय ६७ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ।
त्यसैगरी आज कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ५५ पैसा छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ।त्यस्तै मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा छ भने बिक्रिदर २६ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ।त्यस्तै आज साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ।
युएई दिराम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ।बहराईन दिनार एकको खरिददर २ सय ९५ रुपैयाँ ८ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर २ सय ९६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ।त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४४ रुपैयाँ ७१ पैसा, बिक्रिदर १ सय ४५ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ। दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ९ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ।
थप संकटमा पर्दै रवि लामिछाने : आज फेरि अदालत लगिँदै, ५ वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने
सरकारले आणविक उद्योग खोल्न सक्ने !